eNasha.com - ज्योतिषहरुको हिलारी-ओबामा झगडा
अमेरिकी जनतामाझ अब कसले राष्ट्रपति जित्ला भन्ने चासो दिनदिनै बढिरहेको बेला यो चासो फैलिएर भविष्यवेत्ता र ज्योतिषहरुसम्म पुगिसकेको छ ।
यस वर्ष अमेरिकाको डेनभरमा जम्मा भएका ४५ देशका १५ सय बढी ज्योतिषहरुले नोभेम्बरमा बाराक ओबामाले राष्ट्रपतिको दौडमा जीत हासिल गर्ने बताएका छन् ।
"युनाइटेड एस्ट्रोलजी कन्फरेन्सः रकिङ द युनिभर्स" सम्मेलनमा भेला भएकाहरुले बाराक ओबामाले जित्ने बताएका छन् । जोन म्याक्केन, बाराक ओबामा र हिलारी क्लिन्टनबीच भएको प्रतिस्पर्धामा कसले जित्ला भन्ने प्रश्मा बाराकलाई जिताएका हुन् ।
"बाराकको जन्म दिन १९६१ अगस्त ४ को बिहान ७ः११ बजे भएको हुँदा उनले जित्छन् भन्ने मलाई पक्का छ", डलासकी ज्योतिष जोनी पारटीले बताइन् ।
ज्योतिषहरुको प्रभाव अमेरिकामा यति छ कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्शनको राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा गरेको भविष्यवाणीमा रोज मेरी वुड्सले आफ्नो भनाइ राष्ट्रपतिलाई दिएकी थिइन् । त्यस्तै नान्सी रेगन जो रिचर्डकी श्रीमती थिइन्, उनले पनि आफ्ना पतिको हात धेरै पटक हेराएकी थिइन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धताका बेलायती जासूसहरुले एक जना प्रख्यात ज्योतिषलाई हिटलरको कामकारवाहीका विषयमा भविष्य हेराएका थिए ।
"हाम्रा धेरै कुराहरु प्रकृतिको एउटा भाग मात्र हुन् । सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहहरु र ताराले हाम्रा गतिविधिलाई नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन्", ज्योतिष अर्कम्यानले कार्यक्रममा बताए ।
२५ प्रतिशत अमेरिकीहरु मात्र ज्योतिष र भाग्यवादमा विश्वास गर्दछन् भनी २००५ मा गरिएको एउटा र्सर्भेमा जनाइएको छ । तर पछिल्लो समयमा यो संख्या बढ्दै गएको समाचारमा जनाइएको छ ।
उसो भए आउँदो नोभेम्बरमा कसले अमेरिकी राष्ट्रपतिको दौडमा जित्दैछ त ? पार्टीहरुको भनाइ मान्ने हो भने म्याक्केनले जित्दैछन्, ओबामा अलि पछि नै छन् । तर ज्योतिषहरुमध्ये एक इस्तानाबुलकी हाकान किर्कोउले चाहिँ इराकबाट अमेरिकी सेना सन् २०१० सम्म फर्किसक्ने घोषणा गरेकी छिन् । उनले भनिन्- "अमेरिकी राष्ट्रपति जो सुकै होस् मलाई मतलब छैन ।"
यस्तो पनि ! माया सुन्दरी बलिउड गुगल मुद्दा मामिला मूर्ख्याइँ सेलेब्रिटी इन्टरनेट भव्यता विज्ञापन श्रीमानश्रीमती प्रविधि कीर्तिमान परिस्थिति उपाय नग्नता हलिउड फट्याइँ सेक्स